Malunga nathi - Imishini ye-Hangzhou Hongli Co, Ltd.
Yasekwa ngo-Agasti ka-2002, inkampani inabasebenzi abangaphezu kwama-70, amaziko obugcisa ayi-6, lishishini elisekwe kubuchwepheshe kwiPhondo laseZhejiang. Inkampani ifumaneka kwipaki yemizi-mveliso yeLinpu Idolophu, iXiaoshan, iShangzhou City, kwiPhondo le-Zhejiang, nekhilomitha enye ukusuka kwindawo yokuphuma yeLinhang Jinhua Quzhou Expressway ecaleni kwendlela ephindaphindiweyo yokuhamba kwendlela yePhondo engu-03. Uyilo lwezixhobo ezilahlayo kunye nemveliso, umgca wokuhamba weqonga, amalungu asetyenzwa ngokusekwe.
Ifilosofi yeshishini: ingqibelelo, ubunye, pragmatism, ubuchule kunye nokukhula okuzinzileyo
Yasekwa ngo-1997, I-Hangzhou Hua'an Medical & Health Equipment CO, LTD ngumenzi oqeqeshiweyo kunye nokhokelayo ekwenzeni izixhobo zokuqonda ngokubanzi kubandakanya i-Digital Thermometers, i-Infrared Thermometers, kunye ne-Sphygmomanometers yedijithali njl. Njl.
Njengeshishini lobuchwepheshe obuphezulu, isebe lethu le-R & D liquka iinjineli, amagcisa kunye nomyili wemisebenzi onamava optoelectronics, semiconductor noyilo lwe-IC njl.
Sele simisele inkqubo yeQC engqongqo nefanelekileyo. Zonke iimveliso zethu ziveliswa ngokungqongqo phantsi kwenkqubo yolawulo esemgangathweni ye-ISO 13485 kunye ne-21CFR820, ukuze kuhlangatyezwane neemfuno ze-Medical CE kunye ne-US FDA.
Inkonzo egqwesileyo kunye nomgangatho othembekileyo usinceda siphumelele igama lehlabathi, umzekelo:
IJamani, iFrance, i-Itali, iSpain, i-United Kingdom, iPoland… I-USA, iBrazil, iArgentina, iColombia, iMexico, iChile… IOstreliya, iPhilippine, iMalaysia, iIndonesia, iThailand, iSingapore… UMzantsi Afrika, eNigeria… Namanye amazwe
Iya kuthakazelelwa into yokuba ungaqhagamshelana nathi ngolwazi oluthe kratya malunga nenkampani yethu kunye neemveliso. Wamkelekile ukusebenzisana nathi nge-OEM kunye ne-ODM.